Fivoaran'ny valanaretina :: Niampy efatra ireo voan’ny « Coronavirus » • AoRaha
Mivoatra indray, omaly, ny tarehimarika mikasika ny aretina “Coronavirus” eto Madagasikara. Niampy efatra ireo olona sivy ambin’ny folo voatily ho mitondra ny tsimok’aretina “Covid-19”. “Tao anatin’ireo olona valo amby valopolo nanaovana fitiliana, omaly maraina hatramin’ny 12 ora antoandro, ireto olona voa vaovao ireto”, araka ny fampitam-baovaon’ny Ivontoeram-pibaikoana momba ny “Covid-19” (CCO), eny Ivato.
“Olona tao anatin’ireo zotram-piaramanidina tonga farany teto amintsika, izay avy any amin’ny firenena iparitahan’io valanaretina io ireo olona telo amby roapolo ireo. Tsy misy ny aina nafoy hatramin’izao. Ny roa amby roapolo tsy misy soritra aretina. Ny iray no tena narary, omaly maraina (Ndrl: afak’omaly) satria nanao fahasemporana somary mihasarotra. Avotra soa aman-tsara izy rehefa nanao izay azo natao ny mpitsabo namonjena azy”, hoy ny Pr Vololontiana Hanta Marie Danielle, misahana ny famoaham-baovao eny amin’ny CCO, omaly.
Lehilahy avokoa ny telo tamin’ireto olona efatra vaovao mitondra ny tsimok’aretina “Covid-19”: Italiana, 72 taona; Malagasy, 31 taona sy 25 taona. Vehivavy malagasy, 63 taona, ny fahefatra. Arahi-maso akaiky ny fivoaran’ny fahasalaman’izy telo amby roapolo: ny hafanana, ny tosi-dra, ny tahan’ny ôksizena ao anatin’ny vatany sy ny zavatra itarainan’izy ireo, tahaka ny fahasemporana, fandoavana sy ny fivalanana ary ny fanaintainana sy manakotsako amin’ny vatana.
“ Fitambarana fanafody roa no hitsaboana azy ireo, izay hita fa mahomby tokoa. Olona efa marary no mihinana an’ireo fanafody ireo. Misy kosa ny fisorohana, izay tsy voatery ho fanafody, toy ny fihinanana legioma, voankazo sy ny fanaovana evoka amin’ny raokandro mba hampiakatra ny hery fiarovana sady hikolokoloana ny taovam-pisefoana”, hoy ihany ny Pr Vololontiana Hanta Marie Danielle.
Fandrabirabiana sy fitsikerana :: Tezitra tamin’ireo mpanatsatso ny Filoha Rajoelina
Seho nahemotra :: Mbola manan-kery ireo tapakila efa lafo